6 Zviitiko zvekuzvizivisa Iwe Chaizvo Zvinoita Musiyano - Pfungwa
6 Zviitiko zvekuzvizivisa Iwe Chaizvo Zvinoita Musiyano
Mumwe anofanirwa kuzvinzwisisa ivo pachavo kana vachida kukura nekuvandudza. Chishandiso chakakoshesesa chauchazoda pabasa iri kuzviziva.
Iwe haugone kuita shanduko ine hutano kana kukura mune chero nzira inonzwisisika kana iwe usinga zive pfungwa dzako, manzwiro, uye nemabatiro aunoita nenyika.
TO zvakakwana uye akatendeka kuongororwa kweako pachako kunofanirwa kuratidza hunhu hwakanaka uye simba raunogona kukudziridza kumberi pamwe nehunhu hwakashata uye hunhu hwaunogona kushandira kubvisa.
Haasi munhu wese munhu anozviziva. Vamwe vanhu vane zvishoma, vamwe vanhu vane zvakawanda. Nhau dzakanaka ndedzekuti kuzviziva iwe chimwe chinhu icho chero munhu chaanogona kugadzirisa nekuzvipira kwekuedza.
Kuvandudza kuzviziva kwakafanana nechero humwe hunyanzvi. Iwe unozofanirwa kushanda nesimba nguva dzose mukusimudzira hunyanzvi uye kudzidzira kuti uve nani pazviri.
Zviitiko zviri muchinyorwa chino zvinokubatsira iwe kukudziridza kuzviziva kwako. Kune nzira dzakawanda dzekufamba pamusoro pekuvandudza kuzviziva kwako, zvimwe zvakaoma kupfuura vamwe.
wwe bhandi riri kutengeswa zvakachipa
Asi hapana chimwe chezviitiko zvekuzviziva-icho chingashande kwauri kana iwe ukasazvipa iwe nguva yakakwana uye moyo murefu kuti zviite kuti zvikushandire.
Chengeta izvo mupfungwa kana iwe ukagumbuka kana kutanga kuregeredza basa.
1. Chengeta chinyorwa.
Journaling chishandiso chine simba chekuzvivandudza uye kuzviziva.
Pfungwa dzemunhu dzinogona kuve chinhu chisina kujeka, chisina kuvimbika. Unogona kusangana nemanzwiro ane simba ausina chokwadi nazvo, kuturikira zvisizvo zviitiko zvinoitika kwauri, kana kungokanganwa zvinhu.
Chinyorwa chinogona kukubatsira kupokana neizvi zvese uye zvimwe zvakawanda, kusanganisira kunyora zvinyorwa zvakanyorwa zverwendo rwako kuti ugone kuona kuti wakasvika nekuenda zvakadii.
Kune akawanda mazano kunze uko kwekutepfenyura. Vamwe vanhu vakanyatsojeka uye vanochengeta mashoma mabara magazini. Vamwe vanozadza mapeji akazara mumabhuku ekunyorera nekurasa zvese zvavanogona kufunga nezvazvo.
Journaling seyako yekuzviziva chiitiko chinofanirwa kuve yakatarisa kunzvimbo dzehupenyu hwako uko kuzviziva-kunokosha.
Iwe uchada kunyora manzwiro emamiriro ekunze, manzwiro akasimba awakasangana nawo zuva rese, ongorora kuti sei wakanzwa zvawakaita, mhinduro yako, uye zvaungadai wakaita zvirinani nemamiriro acho ezvinhu.
kusaina murume anokuda asi anotya
Ndezvipi sarudzo zvawakaita mukati mezuva? Sei wakavaita? Chii chaungaite zvirinani nguva inotevera?
Mushure mechinguva, unozokwanisa kutarisa mukati mejenari yako uye uone maitiro ako ehunhu. Paunenge iwe uchinge waona iwo mapatani, iwe unogona ipapo gadzira mhinduro nyowani kumanzwiro uye mamiriro aunosangana nawo.
Ichi chinyorwa chedu chichakubatsira iwe kutanga: Kuburitsa 101: Maitiro Ekunyora, Zvekunyora, Nei Zvakakosha
2. Dzidzira kufungisisa uye kufunga.
Kufungisisa uye kufunga zvinhu zviviri zvine mutsindo buzzwords mukuzvivandudza-kwako. Ivo anoshandiswa kazhinji zvekuti zviri nyore kuvakanganisa nekuda kwezvinhu zvisina kudzika, zviri nyore. Havasi.
Kufungisisa kunobatsira nekuti iwe unotora imwe nguva yekunangisa simba rako kudzikamisa pfungwa dzako uye nekunzwa izvo zvaunoda kuti unzwe. Iko kugona kwekunzwa manzwiro ako chinhu chakasarudzika chekuzviziva uye hutano hwepamoyo.
Manzwiro asina kunaka haangodzike mukukweva utsi. Kumedza manzwiro ako asina kunaka kwakafanana nekudira peturu pamuti wakaoma. Nokukurumidza kana gare gare, kupenya kwemanzwiro kuchadzika iyo tinder, kubatidza peturu, uye iwo manzwiro anoita hasha nekupisa.
Iwe unogona kujekesa kuti pakaoma matanda kunze woisa peturu kure nemidziyo senge kufungisisa uye kufunga.
Kurangarira kuve kuvapo panguva ino, kwete kushungurudza nezveramangwana kana kuchema zvakapfuura. Uye sekunge chero munhu ane ndangariro dzakashata kana zviitiko achakuudza, kusagara pane ramangwana kana zvakapfuura kunogona kunge kwakaomarara zvakaoma.
Kuedza kudhonza pfungwa dzako kubva kune izvo zviitiko zviri kunze kwekutonga kwako uye kudzokera kunguva iripo zvinoda kugara uchidzidzira nekuedza.
Iko kubatsirwa kukuru kwepfungwa kunzwisisika zvauri kunzwa panguva iyoyo, kuzviziva, uye kuita sarudzo nezve izvo zviitiko kubva kune inofungidzirwa mamiriro epfungwa.
Pfungwa ndeyekuti dzivisa kuita nekukurumidza kana nekuda kwemanzwiro ekukurumidza. Izvo zvinokupa iwe kukura kukuru pamusoro pako uye kunovaka kuzviziva kwako. Unotanga kunzwisisa kuti sei uri kupindura zvauri.
Kufungisisa uye kufunga zviitwa zvekuzviziva iwe zvaunogona kudzidzira nekusimbisa zuva nezuva. Hupenyu hunotipa mukana wakakwana wekudzidzira kufunga uye munhu wese anofanirwa kuveza maminetsi mashanu zuva rega rega kwekufungisisa kudiki.
3. Ziva uye ujekese tsika dzako.
Kutendeseka chiito chekurarama nekutenda uye tsika dzako. Izvo zvakaoma kuita kana iwe usingazive izvo zvaunotenda uye tsika.
Vanhu vazhinji vakadaro vamwe zano rezvavanomira, kana chete nekuti zvinovabata pamoyo. Asi kugona kutsanangura tsika dzako zvakajeka kunoita kuti zvive nyore kwazvo kunzwisisa kuti sei uchitenda uye nekunzwa zvinhu zvaunoita.
Ndiko kusaka kujekesa zvaunotenda uye hunhu ibasa rakakosha rekuzviziva.
Tora nguva yekunyatsofunga nezvehunhu hwako (izvi, nenzira, chiitiko chakanakisa chejenali rako!)
Zvibvunze mibvunzo inotevera:
Rey mysterio ziso kukuvara kugadzirisa
“Ndezvipi zvinopesana nezvandinotenda?”
Mubvunzo wekupedzisira uyu wakakosha. Zvakanaka kutenda chero chaunoda, asi iwe unofanirwa kuongorora kuti iro ruzivo rwakabvepi uye nei uchizvitenda. Kupokana kunopesana nekutenda kunomanikidza kuti ubvunze zvaunotenda.
Munhu anozviziva munhu asiri kuomerera pane zvavanotenda nekuda kwekuti vanozvitenda. Vanogamuchira zvavanotenda nekuti zvavakaita kuongororwa kwakatariswa kwezvese zvingangodaro uye vakasarudza zvavaifunga kuti ichokwadi.
Kunzwisisa mativi ese ekutenda kunokutendera kupokana nemaonero ako asipo emanzwiro ako uye sarudzo, inova nzira ine hutano yekurovedza muviri uye kukura kuzviziva.
4. Chiitiko uye dzidza zvinhu zvitsva.
Nyika inzvimbo yakakura izere nezviitiko zvakawanda uye zvinhu zvekudzidza. Chimwe chiitiko chinoshanda kwazvo chekuzviziva iwe kutsvaga zvinhu izvi kunze.
Kubatsira kunowanikwa nezvinoitika zvitsva uye ruzivo ndezvekuti zvinokumanikidza kuti uongororezve zvaunofunga nezviito zvako. Vanokumanikidza kuti udaro funga nenzira nyowani uye dzakasiyana.
Chimwe chiitiko chinobatsira kupokana nenzira yako yekufunga kushandisa kushomeka pazvinhu zvinozivikanwa. Akazviita sei? Zvakanaka, uri kuverenga chinyorwa izvozvi, saka ngatishandise kunyora semuenzaniso.
Vanyori kana vasina ruzivo vanyori vanowanzo balk pane pfungwa yehuwandu hwemashoko kuverenga. “Chii? 500 mazwi? Handikwanise kutaura zvese zvandinofanira kutaura mumazwi mazana mashanu! Ndinoda 1000 kana kupfuura! 'Handidi kumanikidzwa kuita basa rangu!'
Kuganhurirwa senge kunoshanda zvinoverengeka zvinangwa. Mune masvikiro epapepa, mupepeti anogona kungova nenzvimbo yakakwana yemazwi mazana mashanu. Chidimbu chiri pasi pemashoko mazana mashanu nekuti hachigone kuburitswa kana zvisiri. Mune masvikiro emagetsi, izvo zvishoma pane dambudziko, kunyangwe chinyorwa chakarebesa chine njodzi kurasa kufarira kwemuverengi.
Izwi rinogumira rinomanikidza munyori kuti afunge nenzira yavasingazombodaro. Ivo vanofanirwa kutora zvese zvavanoda kutaura uye vozvikanda pasi kune iyo yakakosha ruzivo iyo ichiri kuzadzisa chinangwa cheichi chidimbu chavari kunyora. Iko hakuna nzvimbo yemashoko asingabatsiri uye akashata kana iwe uchingova nemazana mashanu emashoko ekutaura zvese zvaunoda kutaura nezve chidzidzo.
Zviitiko zvitsva uye hunyanzvi zvinokudziridza nzvimbo dzako. Zvikanganiso zvinokudenha iwe kuti ududzire zvirinani izvo iwe zvawakawana mune izvo zvitsva zvitsva.
5. Dzivisa kutonga manzwiro ako uye zvakaitika.
Zviri zvemuzvarirwo kutedzeredza tichipinda mukutonga pamusoro pemanzwiro edu, zviitiko, uye sarudzo.
Mushure mezvose, isu tinoda kukamura izvo zvinhu zvakanyatsonaka muzvikamu zvakanaka nezvakaipa kuti tiite simba risinganetsi renyika yedu.
Asi izvo hazvisi izvo nguva dzose chinhu chakakodzera kuita. Muchokwadi, zvinogona kunge zviri kukuchengeta iwe wakanamatira mune yakasarudzika yekuzviongorora-pachako uye kutonga.
Zvakanaka, chimwe chinhu chinoitika, uye iwe unofunga kuti zvakanaka nekuti zvinoita kuti unzwe zvakanaka. Asi ko kana zvisiri? Ko kana icho chinhu chakanaka chauri kusangana nacho ikozvino chisina kunaka kwauri?
kutaura sei kana mukadzi akwezva kwauri asi achihwanda
Ko kana munhu iyeye anoshamisa waunosangana naye anoita kuti unzwe kunge uri musoro pamusoro pezvitsitsinho murudo arikukanda mireza yakatsvuka yakawanda zvekuti urikungofuratira ivo?
Ko kana chibvumirano icho chinoita senge chakanyanya kunaka kuti chive chechokwadi, izvo zviri kukuita kuti unzwe wakakura nekuti wave kuda kuchengetedza imwe mari pane chimwe chinhu chaunoda, chaizvo chakanyanya kunaka kuti chive chechokwadi?
Maonero atinodudzira nepasirese anogona kukanganisa kugona kwedu. Chiitiko chakakosha chekuzviziva kuedza kutarisa pamufananidzo wese.
Izvo zvakanaka kuti unakidzwe uye uwane mufaro mune zvakanaka chero bedzi zvine musoro. Izvo zvakare zvakanaka kuti uone uye ugamuchire zvakashata, kunyanya kana chiri chikamu cheimwe chinangwa chikuru chauri kuteedzera.
Maitiro aunoita izvozvo ndeekuisa parutivi kusarudzika kwako uye manzwiro kuti iwe ugone kutarisa kumamiriro ehupenyu hwako zvinangwa.
kurumbidza sei murume pachimiro chake
Paunowedzera kuita izvozvo nezvinhu zvekunze, zviri nyore kuzviita iwe nemanzwiro ako uye nesarudzo.
6. Kumbira mhinduro kubva kune munhu anovimbwa naye.
Kuzviongorora kunogona kuva noutsinye. Dzimwe nguva isu hatigone kuwana mufananidzo wakajeka wekuti tiri vanaani nekuda kwesarudzo dzedu uye manzwiro.
Panogona kuvepo mavara mapofu mukuzvibata uye maitiro izvo isu tinofunga zvinotishandira, asi ivo vari kutotikuvadza isu.
Kuziva aya mapofu mapofu kunogona kuve kwakanyanya kugadzikana nerubatsiro rwemunhu anovimbika wechitatu bato. Zvakanakisa, anenge ari munhu akavimbika anokuziva iwe mushe, ane pfungwa yaunoremekedza.
Anopa chipangamazano wehutano hwepfungwa anogona kunge ari akanakisa imwe sarudzo kana ukasaitika kuve nemunhu akadaro muhupenyu hwako izvozvi.
Bvunza munhu iyeye zvavanofunga kuti pane zvaunogona uye zvausingakwanise kuita. Vabvunze pavanofunga kuti iwe unogona kuzvivandudza iwe pachako.
Yambiro yakanaka, unogona kusada mhinduro dzaunonzwa. Pamwe mhinduro yavo inobata pazvinhu zvine chekuita nemweya, kana pamwe havasi ivo vane hukama zvakanyanya nemazwi avo.
Chero chingave chikonzero, usarega kutsamwa kwako kuchisimuka kana vakakuudza chimwe chinhu chausingade kunzwa. Tora zvishoma kufema kwakadzika, vatende nekuda kwemhinduro yavo, uye uvazive kuti iwe unoda imwe nguva yekufunga nezve izvo zvavakataura.
Izvo zvinokutendera iwe kuti usataure zvisizvo zvisizvo nekudzoka, zvidzikame iwe, uye funga mazwi avo. Ipapo iwe unogona kutora iyo nyowani ruzivo uye woishandisa kuenderera kuti uwedzere yako yekuzviziva-kuziva.
Tsvaga Kuti Yako 'Yega-Pfungwa' Inochinja Sei Zvese Zvaunoita iwe
Chii chinonzi Kuzvifungisisa Uye Nei Zvakakosha Zvikuru?
4 Zviratidzo Urikunyepera Iwe Pachezvako (+ 6 Nzira dzekuzvimisa)
wwe rarama chiitiko chiitiko 2017
hunhu hunoita shamwari yakanaka
unotamba sei nesimba kuti uwane
brock vs hombe show 2015
zvinhu zvinotapira zvekuitira musikana waunoda
maitiro ekuti iwe unzwe senge